ဝကျခွံ တငျးတိတျ အမာရှတျနဲ့ အဆီဖုတှကွေောငျ့ စိတျညဈနရေရငျ – Cele Lover
Hello မလှခငျြတို့ရေ ဒီကမလှခငျြနဲ့ အတူတူ လိုကျလုပျရအောငျ သဘာဝနညျးလမျးလေးတှနေဲ့ ပီးရငျ အတူတူလှကွတာပေါ့ It’s skin care time!!! ဒီတဈပတျတော့ အမေးမြားနတေဲ့ မေးခှနျးတှေ ထဲက တဈခုဖွဈတဲ့ တငျးတိပျတှေ ထှကျနတေယျ ဝကျခွံအမာရှတျတှေ ရှိနတေယျ အဆီဖုတှေ ဖွဈနတေယျ
အမဲစကျတှကွေောငျ့ စိတျညဈနေ ရတယျ ဘာလုပျရမလဲ??? အကွံဉာဏျပေးပါဦး တငျပေးပါဦး ဆိုသူတှအေတှကျ လှယျကူရိုးရှငျးပွီး အကုနျ အကသြကျသာတဲ့ သဘာဝအိမျတှငျးနီးလေးကို ယူဆောငျလာပါပွီ….ဒါကတော့ Potato Mask (အာလူးနဲ့ မကျြနှာပေါငျးခွငျး) ပါပဲ ပါဝငျပစ်စညျးက အာလူးတဈမြိုးတညျးလား ?
Yes – အာလူးတဈမြိုးတညျးပါပဲ ဒါပမေယျ့လညျး ပိုပွီးထိရောကျစတေဲ့ နညျးလမျးလေးတော့ ရှိတာပေါ့ ဘယျလိုလုပျလဲဆိုတာ ကွညျ့ရအောငျ။ ပွုလုပျပုံ အာလူးကို ရစေငျအောငျဆေးပါ အခှံနှာပါ
သနပျခါးကြောကျပဉျြကိုလညျး ရစေငျအောငျဆေးပါ (I ကတော့ ရပေူနဲ့ ဆေးပါတယျ မကျြနှာမှာသုံးမှာဖွဈတဲ့အတှကျ bacteria မဝငျဖို့ သတိထားရပါမယျ) အခှံနှာထားတဲ့ အာလူးကို ရအေနညျးငယျဖွငျ့ ကြောကျပဉျြပျေါသှေးပါ ပွီးရငျ အာလူးကိုယူပွီး မကျြနှာပျေါလိမျးပေးပါ
အရကေုနျသှားရငျ ထပျသှေးပွီး လိမျးပါ(သှေးထားတဲ့ အရညျကို မလိမျးပါဘူးနျော… သှေးထားတဲ့ အာလူးကို ကိုငျပွီးလိမျးတာပါ) ဘာကွောငျ့ သှေးပေးတာ လဲဆိုတော့ အာလူးထဲက အာနိသငျတှေ ပိုထှကျစခေငျြလို့ပါရှငျ့ လိမျးပွီးပွီဆိုရငျ လုံးဝခွောကျပွီး တငျးလာ တဲ့အထိ မိနဈ ၂၀ ခနျ့ထားပေးပါ ပွီးရငျတော့ မိမိသုံးနကြေ facial foam လေးနဲ့ မကျြနှာသဈလို့ရပါပွီ
ဒီနညျးကတော့ တကယျကို ထိရောကျပွီး ဘေးဥပဒျ (side effect) မရှိတာမို့ တငျးတိပျအရမျးမြားနတေဲ့သူမြား၊ အမှနျတကယျ လိမျးဖို့လိုအပျနေ တဲ့သူမြားနတေို့ငျး လိမျးပေးလို့ရ ပါတယျနျော ဒီနညျးလမျးလေးကို တဈခြို့က သိတယျ တဈခြို့က မသိဘူး တဈခြို့ ကလညျး သိရကျနဲ့ မလုပျဘူး Why?
ဘယျအရာမဆို ဒီနလေု့ပျ ဒီနပြေ့ောကျ ဆိုတာ မရှိပါဘူးနျော…. စိတျရှညျရှညျ လုပျမှ result တဈခုကို ရတာပါနျော ဒီတဈပတျ လှယျကူ ရိုးရှငျးတဲ့ အိမျတှငျး သဘာဝ အသားအရညျ ထိနျးသိမျးတဲ့ နညျးလမျးလေးကို ကွိုကျနှဈသကျကွမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ
Iကိုယျတိုငျက အားလုံးကို လှစခေငျြလို့ မတ်ေတာဖွငျ့ sharing လုပျပေးခွငျးဖွဈတာကွောငျ့ ဒီနညျးလေးကို မသိသေးတဲ့ ကိုယျ့သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေအေတှကျလညျး post လေးကို ထပျပွီး ဝမြှေပေးလိုကျပါဦး ပေးလိုကျကွဦးနျော
Hello မလှချင်တို့ရေ ဒီကမလှချင်နဲ့ အတူတူ လိုက်လုပ်ရအောင် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ပီးရင် အတူတူလှကြတာပေါ့​ It’s skin care time!!! ဒီတစ်ပတ်တော့ အမေးများနေတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တင်းတိပ်တွေ ထွက်နေတယ် ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ ရှိနေတယ် အဆီဖုတွေ ဖြစ်နေတယ်
အမဲစက်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေ ရတယ် ဘာလုပ်ရမလဲ??? အကြံဉာဏ်ပေးပါဦး တင်ပေးပါဦး ဆိုသူတွေအတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အကုန် အကျသက်သာတဲ့ သဘာဝအိမ်တွင်းနီးလေးကို ယူဆောင်လာပါပြီ….ဒါကတော့ Potato Mask (အာလူးနဲ့ မျက်နှာပေါင်းခြင်း) ပါပဲ ပါဝင်ပစ္စည်းက အာလူးတစ်မျိုးတည်းလား ?
Yes – အာလူးတစ်မျိုးတည်းပါပဲ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုပြီးထိရောက်စေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတော့ ရှိတာပေါ့ ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။ ပြုလုပ်ပုံ အာလူးကို ရေစင်အောင်ဆေးပါ အခွံနွှာပါ
သနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ကိုလည်း ရေစင်အောင်ဆေးပါ (I ကတော့ ရေပူနဲ့ ဆေးပါတယ် မျက်နှာမှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် bacteria မဝင်ဖို့ သတိထားရပါမယ်) အခွံနွှာထားတဲ့ အာလူးကို ရေအနည်းငယ်ဖြင့် ကျောက်ပျဉ်ပေါ်သွေးပါ ပြီးရင် အာလူးကိုယူပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ
အရေကုန်သွားရင် ထပ်သွေးပြီး လိမ်းပါ(သွေးထားတဲ့ အရည်ကို မလိမ်းပါဘူးနော်… သွေးထားတဲ့ အာလူးကို ကိုင်ပြီးလိမ်းတာပါ) ဘာကြောင့် သွေးပေးတာ လဲဆိုတော့ အာလူးထဲက အာနိသင်တွေ ပိုထွက်စေချင်လို့ပါရှင့် လိမ်းပြီးပြီဆိုရင် လုံးဝခြောက်ပြီး တင်းလာ တဲ့အထိ မိနစ် ၂၀ ခန့်ထားပေးပါ ပြီးရင်တော့ မိမိသုံးနေကျ facial foam လေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လို့ရပါပြီ
ဒီနည်းကတော့ တကယ်ကို ထိရောက်ပြီး ဘေးဥပဒ် (side effect) မရှိတာမို့ တင်းတိပ်အရမ်းများနေတဲ့သူများ၊ အမှန်တကယ် လိမ်းဖို့လိုအပ်နေ တဲ့သူများနေ့တိုင်း လိမ်းပေးလို့ရ ပါတယ်နော် ဒီနည်းလမ်းလေးကို တစ်ချို့က သိတယ် တစ်ချို့က မသိဘူး တစ်ချို့ ကလည်း သိရက်နဲ့ မလုပ်ဘူး Why?
ဘယ်အရာမဆို ဒီနေ့လုပ် ဒီနေ့ပျောက် ဆိုတာ မရှိပါဘူးနော်…. စိတ်ရှည်ရှည် လုပ်မှ result တစ်ခုကို ရတာပါနော် ဒီတစ်ပတ် လွယ်ကူ ရိုးရှင်းတဲ့ အိမ်တွင်း သဘာဝ အသားအရည် ထိန်းသိမ်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
Iကိုယ်တိုင်က အားလုံးကို လှစေချင်လို့ မေတ္တာဖြင့် sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တာကြောင့် ဒီနည်းလေးကို မသိသေးတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်း post လေးကို ထပ်ပြီး ဝေမျှပေးလိုက်ပါဦး ပေးလိုက်ကြဦးနော်
Previous Article လညျပငျးကညျြထိကဆြုံးခဲ့သော သူရဲကောငျးမှ နာရေးမခမြှီ ဝငျရောကျပူးကပျပွောဆို( ရုပျသံ )
Next Article မုံရှာမွို့ခံအခြို့ မွနျမာဘီယာဖွငျ့ ခွဆေေး..(အပွညျ့အစုံဖတျရနျ ပုံကိုနှိပျပါ )